SUD YUNGAS / YANACACHI. Country House Takesi - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAndrés
Yindlu yelizwe ebanzi, iiyure ezimbalwa ukusuka eLa Paz, eYanacachi - Sud Yungas, ilungele ukonwabela indalo kunye nexesha kunye nosapho ngaphandle kwamaxhala esixeko. Indlu inamagumbi, igumbi lokutyela, ikhitshi, igadi enkulu, iphuli, ibarbeque kunye neyokupaka. I-Yanacachi yilapho indlela yangaphambili ye-Hispanic ye-Takesi iphela.
Le ndawo iphawulwa bubukhulu beendawo zayo ezivulekileyo zomoya, iqula lokuqubha elikhethekileyo elinombono we-panoramic we-Yungas' landscape, ukuzola kwayo, ubumfihlo kunye nendawo enobuchule edolophini.
4.62 · Izimvo eziyi-22
I-Yanacachi yidolophu encinci, ezolileyo kwaye ekhuselekileyo. Ineevenkile ezisisiseko, isikolo, isibhedlele esisisiseko, iinkonzo ezisisiseko (amandla, amanzi okusela, unxibelelwano). Abemi banobuhlobo. Kukho iivenkile ezininzi zasebumelwaneni apho unokuthenga khona izinto zokugcina, iziselo ezithambileyo, amanzi, igrosari. Kukwakho nefowuni kunye nomqondiso we-Intanethi ovela kwi-Entel kunye ne-Tigo.
Ngesiqhelo andikho, le nkcukacha iya kulungelelaniswa ngexesha lobhukisho.